Iyo Yepamutemo WWDC App Yakagadziridzwa NeNew Dhizaini | IPhone nhau
Iyo yepamutemo WWDC application inovandudzwa neye nyowani dhizaini uye vhezheni yeTVOS
Tangopfuura vhiki tiri kure neWWDC16, asi Apple yanga ichigadzirira zvese zvechiitiko kwenguva yakareba. Nhau dzekutanga dzataive nadzo pamusoro peiyo inotevera WWDC rakauya kwatiri na chikamu chaSiri paakareurura kwatiri zuva raizoitika. Nguva pfupi yapfuura, mamwe makuhwa akatanga kutenderera, senge iyo Apple Music yaizove kusimudza chiso kana kuti Tim Cook nekambani vanoronga kuvhura vhezheni itsva yemubatsiri wako anogona kutsvaira makwikwi aya.
Nezuro, Apple yakaenderera negadziriro yayo yemusangano unotevera wekuvandudza, asi panguva ino nhanho ine musoro uye yakapusa: kuvhura gadziridza yako app WWDC. Iyo vhezheni nyowani, inova 5.0, inouya neyakagadzirwa nyowani uye, sezvo WWDC16 ichave yekutanga kuve inoonekwa muApple yazvino set-yepamusoro bhokisi, zvakare inosanganisira Apple TV inoenderana chizvarwa chechina. Iko kunyorera kunowanikwawo neApple Watch, asi kuenderana uku kwakasvika gore rapfuura.
Nyowani vhezheni yeWWDC app inosvika neyakagadzirwa nyowani
Vhezheni yeapp iyi yave kuwanikwa yeTVOS, saka unogona ikozvino kudhawunirodha uye kurodha mavhidhiyo kubva kuWWDC 2016 uye misangano yapfuura paApple TV. Iyi yekuvandudza inotsigira kutenderera kurarama paIOS uye tvOS. Iyo zvakare inotsigira multitasking pane iOS 9 pane iyo iPad.
Mukati mekushandisa isu tine mashedhiyo, mepu, nezvimwe, nezve zvese zvine chekuita neWWDC yegore rino uye pane ruzivo rwakanangana nevagadziri uye zvimwe zvingangofarira kune vasiri-vagadziri. Zvine musoro, hapana ruzivo rwunopihwa pamusoro pezvatichaona mumisangano, asi zvinotarisirwa kuti iOS / tvOS 10, OS X 10.12, watchOS 3 uye izvo Siri ave protagonist, sezvo makuhwa achivimbisa kuti iyo nyowani vhezheni ichaunzwa uye kuti ichaonekwawo paOS X. Unotarisira chii kubva kuWWDC 2016?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Iyo yepamutemo WWDC application inovandudzwa neye nyowani dhizaini uye vhezheni yeTVOS
Tevera iyo Euro yese neOnefootball Euro 2016
Semi-Dzoreredza iyo iOS 9.0.2-9.1 Ikozvino Inowanikwa